Valve Directional Grease | 24EJF-P/SA-V Valve menaka
Valve grease - Valve grease Directional
Home/Valve menaka/Valve Directional Grease 24EJF-P – Valve Directional Grease 4/2, Valve fanosorana menaka grease 24EJF-P/ SA-V
Valve Directional Grease 24EJF-P – Valve Directional Grease 4/2, Valve fanosorana menaka grease 24EJF-P/ SA-V
Product: 24EJF-P/SA-V grease Directional Valve
1. Max. fanerena miasa hatramin'ny 400bar/40Mpa
2. AC Electric maotera miasa, kely sy azo antoka
3. Valiny haingana sy mamadika ny lalan'ny fikorianan'ny rivotra, mora entina
Ny valva grease directional 24EJF-P (SA-V) dia toerana roa, 4-way directional valve entin'ny motera DC hanovana ny hetsika spool amin'ny toe-javatra misokatra sy mihidy amin'ny fantsona solika na manova ny làlan'ny fitaovana fanaraha-maso famatsiana solika. .
Valve directional grease 24E J FP natao ho asa azo itokisana na dia ao anatin'ny fepetra henjana aza (toy ny mari-pana ambany na menaka viscosity avo). Ity valva fitarihana menaka ity dia mety amin'ny rafitra fanosotra menaka na menaka miaraka amin'ny fanerena nominal 40MPa na latsaka ary ao amin'ny sodina sampana lehibe amin'ny rafitra hydraulic. SA-V grease directional valve azo ampiasaina ho toy ny roa-toerana efatra-lalana; roa-toerana telo-lalana sy roa-toerana roa-lalana, telo karazana tari-dalana valva.
Ny valva grease directional 24EJF-P (SA-V) dia ahitana motera DC, switch limit, trano valva, fitaovana mpanova rectifier ary singa hafa napetraka ao amin'ny takelaka vy ary napetraka ao amin'ny firafitry ny akorandriaka fiarovana.
Ny boaty fanaraha-maso elektrônika ao amin'ny rafitra dia mandefa ny famantarana mifamadika (ny fanerena farany amin'ny rafitra) mba hampihodina ny motera DC, mitondra ny spool amin'ny alàlan'ny kodiaran'ny eccentric ho toy ny fihetsika mifamaly. Rehefa mifindra any amin'ny toeran'ny fihodinana ilaina ny spool, ny faran'ny valva amin'ny baffle touch limit switch mba hiasa, dia namoaka famantarana elektrika ho an'ny boaty fanaraha-maso elektronika, nandidy ny hampitsahatra ny fihodinan'ny maotera DC, hamita ny dingana fanodinana.
Ahoana ny fampandehanana ny grease Directional Valve 24EJF-P (SA-V):
1. Ny valva valva 24EJF-P (SA-V) fanosotra dia tokony hapetraka eo anoloan'ny fantsona lehibe sy sampana amin'ny rafitra, tokony hapetraka ao amin'ny faritra izay mora ny fanaraha-maso ny rivotra sy ny fanamainana ary ny manodidina dia tsy afaka. manelingelina ny mekanisma mihetsika.
2. Rehefa ampiasaina ho valva 2/2, dia tokony hosakanana ny seranan-tsolika ho "B" ary ny seranana miverina "R".
3. Rehefa ampiasaina ho valva 3/2, dia tokony hosakanana ny seranan-tsolika ho "B".
4. Ny fifandraisana elektrika araka ny fitsipiky ny fifandraisana etsy ambany.
Kaody famandrihana ny Valve Directional Grease 24EJF-P (SA-V) Series
modely Max. tsindry Fanovana Time Voltage fampidirana Tselatra moto Motor Power Torolàlana amin'ny motera Weight
HS-24EJF-P (SA-V) 40Mpa 0.5S AC 220V 24V DC 50W 20N.m 13kgs
Valve Directional menaka 24EJF-P (SA-V) refy
[email voaaro]2021-11-17T22: 03: 22 + 00: 00
Lubrication, Valve Hydraulic Vent ho an'ny fitaovana fanosotra mandeha ho azy miaraka amin'ny tsipika tokana mandeha amin'ny rivotra.
Auto Lubrication Directional Valve DR6, Hydraulique Control, Directional Lubrication Valve, DR6 Series
Auto Lubrication Directional Valve DR3-4, Hydraulique Control, Directional Lubrication Valve, DR3-4 Series